Folding Coin စျေး - အွန်လိုင်း FLDC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Folding Coin (FLDC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Folding Coin (FLDC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Folding Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
FLDC – Folding Coin
Market ကဦးထုပ်: $213 781.00
volume_24h_usd: $127 859.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Folding Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Folding Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Folding CoinFLDC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000346Folding CoinFLDC သို့ ယူရိုEUR€0.000293Folding CoinFLDC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000265Folding CoinFLDC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000315Folding CoinFLDC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00308Folding CoinFLDC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00218Folding CoinFLDC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00763Folding CoinFLDC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00129Folding CoinFLDC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00046Folding CoinFLDC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000483Folding CoinFLDC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00762Folding CoinFLDC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00269Folding CoinFLDC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00188Folding CoinFLDC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0259Folding CoinFLDC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0585Folding CoinFLDC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000475Folding CoinFLDC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00053Folding CoinFLDC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0108Folding CoinFLDC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00241Folding CoinFLDC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0369Folding CoinFLDC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.411Folding CoinFLDC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.134Folding CoinFLDC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0252Folding CoinFLDC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00947
Folding CoinFLDC သို့ BitcoinBTC0.00000003 Folding CoinFLDC သို့ EthereumETH0.0000009 Folding CoinFLDC သို့ LitecoinLTC0.000006 Folding CoinFLDC သို့ DigitalCashDASH0.000004 Folding CoinFLDC သို့ MoneroXMR0.000004 Folding CoinFLDC သို့ NxtNXT0.027 Folding CoinFLDC သို့ Ethereum ClassicETC0.00005 Folding CoinFLDC သို့ DogecoinDOGE0.1 Folding CoinFLDC သို့ ZCashZEC0.000004 Folding CoinFLDC သို့ BitsharesBTS0.0107 Folding CoinFLDC သို့ DigiByteDGB0.0111 Folding CoinFLDC သို့ RippleXRP0.00123 Folding CoinFLDC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00001 Folding CoinFLDC သို့ PeerCoinPPC0.00115 Folding CoinFLDC သို့ CraigsCoinCRAIG0.158 Folding CoinFLDC သို့ BitstakeXBS0.0148 Folding CoinFLDC သို့ PayCoinXPY0.00605 Folding CoinFLDC သို့ ProsperCoinPRC0.0435 Folding CoinFLDC သို့ YbCoinYBC0.0000002 Folding CoinFLDC သို့ DarkKushDANK0.111 Folding CoinFLDC သို့ GiveCoinGIVE0.751 Folding CoinFLDC သို့ KoboCoinKOBO0.0789 Folding CoinFLDC သို့ DarkTokenDT0.000319 Folding CoinFLDC သို့ CETUS CoinCETI1